Wafdiga Erdogan oo soo gaba gabeeyey booqashadii Muqdisho - Wargane News
Home Somali News Wafdiga Erdogan oo soo gaba gabeeyey booqashadii Muqdisho
Garoonka Diyaaradah Aadan Cade ee magaalada Muqdisho waxaa gelinkii dambe ee maanta ka duulay wafdigii u hogaaminayey madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyib Erdogan oo booqasho maalin ah ku yimid magaalada Muqdisho.
Wafdiga waxaa garoonka ku sii sagootiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh, Raysal wasaare Cumar C/rashiid, Gudoonka Baarlamaan, wasiiro hore xubno ka tirsan madaxtooyada Muqdisho iyo dadweyne.
Madaxweyne Erdogan ayaa maanta xariga ka jaray mashaariic hormarineed oo dowladda Turkiga ka fuliyey Magaalada Muqdisho, waxaan mashaariicdaa ugu balaarnaa Terminalka Garoonka Aadan Cade iyo Isbitaalka Erdogan oo horay loo oran Jiray Digfeer.
Wafdigu waxay heshiis la galeen madaxda dowladda federaalka iyagoo ka soo saaray qodobo lagu cadenayo heshiiska oo ay ka mid ahaayeen balan qaadka dowladda Turkiga ee muddooyinka soo socda qorshaha hormarinta ee Soomaaliya, Wada shaqaynta safaaradaha labada dalka oo lasii xoojinayo.
Erdogan oo hadal ka jeediye shirka ayaa sheegay in dowladda Turkiga mashaariicdan u yihiin isu soo dhawaanshe dhexmaraya dowladaha iyo dadka Walaalaha ee ka soo kal jeeda Turkiga iyo Soomaaliya, Wuxuu balan qaaday in shirkada diyaaraha Turkish Airways ay maalinkasta imaan doonto Muqddisho halka hada ay Muqdisho todobaadkii Afar maalin ay timaado.
Sanadkii 2011-kii ayuu Madaxweyne RecepTayyib Erdogan Soomaaliya yimid xiligaas oo uu ahaa raysal wasaaraha Turkiga ayuu noqday masuulkii ugu sareeya ee Muqdisho yimaad 20 Sano ka dib, waxaan uu markiisii labaad yimid maanta oo ay taariikhdu tahay 25 Janaayo 2015 isagoo madaxweynaha.